NgoLwesine, Septhemba 23, 2021 NgoLwesine, Septhemba 23, 2021 0 by Douglas Karr
Amathrendi Wokumaketha Okuqukethwe kwe-B2B
NgoLwesithathu, Septemba 22, 2021 NgoLwesithathu, Septemba 22, 2021 1 by Douglas Karr
Ubhadane luphazamise kakhulu ukuthambekela kokumakethwa kwabathengi njengoba amabhizinisi azivumelanisa nezenzo zikahulumeni ezithathiwe ukuzama ukuvimbela ukusabalala okusheshayo kwe-COVID-19. Njengoba izingqungquthela bezivaliwe, abathengi be-B2B bathuthele ku-inthanethi kokuqukethwe nezinsizakusebenza ezibonakalayo ukubasiza ngezigaba zohambo lomthengi we-B2B. Ithimba lakwaDigital Marketing Philippines lihlanganise le infographic, B2B Content Marketing Trends e2021 ehambisa ekhaya amathrendi ayi-7 enkabeni yokuthi okuqukethwe yi-B2B
Izimpawu Ezi-7 Awudingi Iseva Yesikhangiso
NgoLwesithathu, Septemba 22, 2021 NgoLwesithathu, Septemba 22, 2021 0 by U-Angelina Lugova
Abahlinzeki abaningi bezobuchwepheshe bezikhangiso bazozama ukukukholisa ukuthi udinga iseva yesikhangiso, ikakhulukazi uma uyinethiwekhi yesikhangiso esinevolumu ephezulu ngoba yilokho abazama ukukuthengisa. Ucezu olunamandla lwesoftware futhi ingaletha ukwenziwa okulinganisekayo kumanethiwekhi athile wesikhangiso nakwabanye abadlali be-tech, kepha iseva yesikhangiso ayisona isixazululo esifanele wonke umuntu kuzo zonke izimo. Eminyakeni yethu engu-10 + yokusebenza embonini, thina
Ama-Moqups: Hlela, Design, Prototype, futhi uhlanganyele nama-Wireframes nama-Mockups anemininingwane
NgoLwesibili, Septhemba 21, 2021 NgoLwesibili, Septhemba 21, 2021 0 by Douglas Karr
Omunye wemisebenzi ejabulisayo futhi egculisayo ebenginayo bekusebenza njengomphathi womkhiqizo wepulatifomu yebhizinisi le-SaaS. Abantu bayithatha kancane inqubo edingekayo ukuze bahlele ngempumelelo, baklame, bafake isibonelo, futhi bahlanganyele kuzinguquko ezincane kakhulu zomsebenzisi. Ukuze ngihlele isici esincane kunazo zonke noma ushintsho lwesixhumi esibonakalayo somsebenzisi, ngingaxoxa nabasebenzisi abasindayo besikhulumi ukuthi basisebenzisa kanjani futhi basebenzisana kanjani nesikhulumi, ngibuze ababengaba amakhasimende ukuthi bakwenza kanjani
Ingqungquthela yamazwe omhlaba eseCincinnati yokubeka uphawu lomkhiqizo nokumaketha iBrandemonium izobuya unyaka wesihlanu ngoLwesithathu nangoLwesine, Okthoba 6-7, 2021, nge-inthanethi isebenzisa uHopin. IBrandemonium 2021 izogxila ekubukeni esikhathini esizayo kulandela i-topsy-turvy 2020 kanye ne-2021. Ingqikithi yengqungquthela kusashesha kakhulu. Ngemuva kwezinyanga eziyi-16 ezedlule, ama-brand kufanele ajwayele ngokushesha kunanini ngaphambili. Siphathe abaholi abaphambili emkhakheni wokumaketha nowokubeka uphawu lokukhuluma ngomhlaba ngekusasa. Umsunguli weBrandemonium
Ukuvikela Umkhiqizo Wakho Negama Lakho Ekumaketheni Nge-imeyili Ngezitifiketi Zezimpawu Eziqinisekisiwe (VMCs)
NgoMsombuluko, Septemba 20, 2021 NgoMsombuluko, Septemba 20, 2021 UMark Packham
Abathengisi be-imeyili bayaqonda ukuthi umkhankaso ophumelelayo umayelana nokungaphezulu kokulethwa nokuthumela imiyalezo. Imayelana nokubandakanya amathemba nokwakha ubudlelwano abangabunakekela ngokuhamba kwesikhathi. Ngokuyisisekelo, lobo buhlobo bokwakha buqala ngodumo nokwethembela kulo mkhiqizo: Iningi (87%) labathengi bomhlaba jikelele bathi babheka isithunzi senkampani lapho bethenga umkhiqizo noma insizakalo. Indlela Idumela Nokwethenjelwa Ezithinta Ngayo Izinqumo Zokuthenga Nokusebenza Kokumaketha Kepha ukulondolozwa
NgeSonto, Septhemba 19, 2021 NgeSonto, Septhemba 19, 2021 Douglas Karr
Ukuqalisa ibhizinisi kungaba yinselele emangalisayo. Noma ngabe usiza ibhizinisi ngoguquko lwalo lwedijithali, okushicilelwe uhlelo lokusebenza lweselula, kuyindawo yokuthengisa, amathuba ukuthi ngeke uhlangabezane nokulindelwe ngamakhasimende akho ngelinye ilanga. Ezweni lezenhlalo elinezilinganiso zomphakathi nezibuyekezo, amathuba akho okuthola izibuyekezo ezingezinhle eziku-inthanethi aseduze. Njengoba kusesidlangalaleni njengoba isilinganiso esingesihle noma ukubuyekeza okungekuhle kungaba, kubalulekile ukuthi ukubone lokho